Kodzero-dzevanhu, 03 Kurume 2017
Chishanu 3 Kurume 2017
Kurume 03, 2017
Meya weBulawayo Anoda Hwaro hweMvura Hwakajeka
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti hurumende inofanirwa kushandisa mukana wekuzara kwakaita madhamu anopa mvura kuguta iri kuti iite hurongwa huchaita kuti guta iri risarambe rakatasirana nedambudziko remvura panguva iyo kusinganaye zvakanaka.
Vatori veNhau veNewsDay Votarisirwa Kumiswa Mudare Vachinzi Vakazvidza VaMugabe?
Vatatu ava vari kumirirwa negweta ravo, VaObey Shava, avo vabvuma kuti vatatu ava vaiswa mumaoko emagweta avo kuitira kuti vazoenda kumatare pachishandiswa masamanisi.
Kurume 02, 2017
Ambassador Thomas Vanoshinyira Musasa Project
Mumwe wevari kubatsirikanawo nemari iyi, Muzvare Angeline Chinyani, vati zvakanakira mabasa emaoko avari kudzidziswa aya ndezvekuti munhu haamanikidzwe kuenda pamudyandigere, sezvo achikwanisa kuramba achizvishandira.
Kurume 01, 2017
Zvinhu zviri kuramba zvichioma muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana mukoti pamwe navana chiremba.
Vanopikisa Voronga Kuratidzira neNyaya yeMichina yeKunyoresa Vavhoti
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuzoratidzira muharare musi wa 22 Kurume sezvo usiri kufara nedanho rehurumende rekuti yave kuda kutenga michina yekunyoresa vavhoti.
Trump Votaura Mudare reCongress Vachikurudzira Kubatana
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vakataura neChipiri mudare reCongress apo vakataura hwaro hwebhajeti ravo rekutanga.
VaMugabe Voshoropodzwa neMashoko Avo eKushora Vari Kunze kweNyika
Vachitaura pamhemberero dzekusvitsa kwavo makore makumi mapfumbamwe nematatu kuMatopo Mugovera wadarika, VaMugabe vakashora vanhu vanoenda kuAmerica kunotsvaga mabasa.
Nherera Dzowaniswa Cheuviri kuManicaland Kuti Dzizviriritire Mune reMangwana
Muzvare Mirirai Nyabvure, avo vanoshanda nesangano rakazvimirira rega reSimukai Child Protection, vanoitawo chirongwa chekupa nherera nevanoshaya mbudzi kuDora kwaMutare.